UPHENGULULO OLUGQIBELELEYO LOMFANA: AKUKHO NTO INGAKO KUYE - UMNIKELI
Chuck E Itshizi
Abagcini Bomnyele 2
Indoda egqibeleleyo ayinanto ininzi kuye
ubukhosi buhlasela inkwenkwezi yokufa
Iitreyila ze Indoda egqibeleleyo Ndiyithengisile njengeyona nto ilula ebomini. Ewe, isishwankathelo esisisiseko somfazi sokulahla inkunkuma, udibana nomfo ongcono obonakala emhle kakhulu ukuba angayinyani ade angabinakho ukuchaza nantoni na oyifumanayo kwiNethiwekhi yoBoniso bhanyabhanya ngalo naliphi na ixesha. Kodwa le movie ilumkile kancinci kwaye ingumfanekiso wobugcisa ongezantsi kobuso. Ayiyo lonto smart, kodwa isenokwanela isitayile esenziwe kakuhle nesenziwe kakuhle ukuba sibe nomdla.
Nali ke ibali: i-lobbyist eyenziwe kakuhle uLeah Vaughn (Sanaa Lathan) unobomi obuhle kakhulu kunye nendlu yeglasi yokoqobo e-LA kunye nobudlelwane obuzinzileyo kunye nomzobi we-hunky uDave (Morris Chestnut). Kodwa ngelixa efuna ukutshata kwaye abe nabantwana-ndineminyaka engama-36 ubudala. Ndikhe ndadibana nobomi bam bonke! Ndiphelelwe ngumhla njengoko uLeah ebeka-uDave akakakulungeli. Emva kokuba iqela lizise lo mbandela kwakhona, bobabini bayahlukana. Kwiinyanga ezimbalwa kamva, uLeah wadibana nengcali ye-IT uCarter Duncan (Michael Ealy) xa wayemhlangula kwi-bro creep ebharini. ULeya uyawa ngumtsalane wakhe kunye nenyaniso yokuba yena ujongeka njengoMichael Ealy kwaye uyambonisa kubahlobo nakubazali bakhe ngephanyazo.
Kodwa emva kokuba uCarter ephantse wabetha umntu ukuba afe ngenxa yokuthetha noLeah ngelixa bekwisikhululo segesi-le ndawo ibikuyo yonke intengiso yemovie kwaye iyangxola kwaye yoyikisa kwimeko-ngobulumko usika amaqhina. Kodwa uCarter-ngolwazi lwakhe oluninzi lwekhompyuter (iiseva ezikude nayo yonke loo nto), izakhono ze-ninja-esque stealth kunye neigloves ze-latex ze-snug-akafuni kumyeka ahambe kwaye uya kwenza nantoni na ukumenza ahlale.
Amandla aphambili kule bhanyabhanya-kwaye nento eyitshonayo kancinci-kukuba ukubetha konke kudlalwa ngokuthe ngqo. UCarter uyathandeka, uyathandeka (emva kokuba uLeah emxelele utata wakhe (uCharles Dutton) ngumlandeli omkhulu webhola, uCarter umbonisa amatikiti epleyiti yasekhaya kumdlalo wosuku olulandelayo). Kodwa ukwerhamncwa eloyikekayo xa umsindo oshushu mhlophe ugqabhukile ngaphantsi komphandle wakhe ozolileyo. ULeya uqala ngokungathandabuzekiyo eluthandweni emva koko woyika ngaphandle kwengqondo yakhe. Indlela umbhali wesikrini uTyger Williams kunye nomlawuli uDavid Rosenthal abonisa ngayo ibali labo lisibeka ngokupheleleyo kwi-POV kaLeah. Oko ngekhe kusebenze kakuhle ngaphandle kokuba uLathan anike intsebenzo yokufunxa engaze inike iingcebiso kwi-histrionics kodwa ikwayinto esilelayo kuyo.
Ngaphandle kwezigcawu ezimbalwa, asikhe sibe ngaphandle kwembono kaLeah, ethi ifuthanisele abanye abalinganiswa kancinci. Ngelixa umlingisi ongumlingisi uHolt McCallany esenza uninzi lweziqendu zakhe njengoMcuphi uRenkin ondidikisayo ngenxa yokufikelela komda kumthetho we-cyberstalking njengoLeah, uRutina Wesley noKathryn Morris njengabahlobo bakaLeah baziva belahlekile. Azikho ukwenza nantoni na ngaphandle kokuphendula kuyo nayiphi na into uLea abaxelela yona. Ngokunjalo nabazali bakaLeya; UDutton kunye noL. Scott Caldwell njengomama kaLeah babonisa kuphela into enye kwaye bayathandeka kangangokuba ukungabikho kwabo kuvakala kanye xa ubushushu bemovie buqala ukwanda.
Umdlalo wekhusi ekugqibeleni uphephezela noLeah ethatha imicimbi ezandleni zakhe ngendlela exhobisayo nenomdla ngelixa ekhuthaza ngobuqhophololo ubunini bemipu, ehleli kancinci. Kukwanjalo ke ngokutyhilwa malunga nexesha elidlulileyo likaCarter, elibuyela umva kuluvo olubi. Okwangoku, uRosenthal usebenzisa izithunzi kunye nokusondela ngokwaneleyo ukuze akumunce. Awukhumbuli nje kwaphela emva kokuba uphumile kwithiyetha. Le yinto enomdla kwibali lakudala elixelwe kakuhle, kodwa ekugqibeleni yile nto kunye nokunye okuncinci.
UTom Speelman unegalelo kuMary Sue, Strange Horizons, eLoser City nakwiSequart Organisation. Uya kuba ne- Isincoko kwincwadi ka-2016 ekwiiStar Wars comics kwaye ukhala malunga neekomikhi kunye nomculo kwi-Twitter @iqosweb
hugh dancy kunye mads mikkelsen
Imbovane Indoda Noonomeva
I-monty python ihashe elingcwele le-grail
upheka njani lo ann reardon
st patrick iinyoka e-ireland
ndixelela abantwana bam meme
boom boom x amadoda ngendaleko